आज काग तिहार र कुकुर तिहार एकैदिन मनाइँदै Nepalpatra आज काग तिहार र कुकुर तिहार एकैदिन मनाइँदै
आज काग तिहार र कुकुर तिहार एकैदिन मनाइँदै
काठमाडौँ । आज काग तिहार र कुकुर तिहार एकैदिन मनाइँदैछ । आज यम पञ्चकको दोस्रो दिन त्रयोदशी र चतुर्दशी तिथि एकैदिन परेकोले काग तिहार र कुकुर तिहार एकैदिन मनाउनु पर्ने भएको हो । आज काग तिहार बिहान र दिउसो कुकुर तिहार मनाइँदैछ ।
सामान्यतया यमपञ्चकको पहिलो दिन काग तिहार र दोस्रो दिन कुकुर तिहार पर्ने भएपनि यस वर्ष तिथि घटबढका कारण काग तिहार र कुकुर तिहार एकैदिन परेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जानकारी दिएको छ ।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज बिहानै यमराजको दूतका रुपमा कागलाई मीठो मीठो चीजवीज खान दिएर मनाइँदैछ । बिहान त्रयोदशी भएको दिन काग तिहार मनाउनुपर्ने भएकाले शास्त्रसम्मत् रुपमा निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
आज बिहान ७ः१४ बजेसम्म त्रयोदशी तिथि छ । त्यसपछि चतुर्दशी तिथि लाग्छ । बिहानै कागलाई पूजा गरी मीठा खानेकुरा खान दिनुपर्छ । कागलाई विशेषगरी दही भात खुवाइन्छ ।
यस्तै तिहार अर्थात् यमपञ्चकको दोस्रो दिन आज इमान्दारीपूर्वक घरको सुरक्षामा खटिने कुकुरको पूजा गरी मीठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मीठो खान दिए यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूलढोकामा बस्ने श्याम र सबल नाम गरेका कुकुरले सहजरूपमा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास छ ।
घरमा कुकुर पाल्नाले मुटु र मधुमेहजस्ता रोग नलाग्ने आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता छ । वैवस्वत मन्वन्तर कुलमा जन्मिएको कुकुर अहिले लोकप्रिय घरपालुवा जनावरका रूपमा समेत स्थापित भएको छ ।
काग र कुकुरलाई यमदूतका रूपमा मानिन्छ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकै दिन मनाइने नरक चतुर्दशी पर्व भने कात्तिक १८ गते बिहीबार बिहान मनाउनुपर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा. श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
आज देशभर कुकुर तिहार पनि मनाइँदै
#कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी